ဆုကြေး၏ချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာအစိတ်အပိုင်းများ: Like, လိုသောနှင့်သင်ယူခြင်း (2010)
ဆုလာဘ် - မှတ်ချက်များ - ဤအဖွဲ့သည်လိုလားမှုနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှု၏အာရုံကြောအလွှာများကိုစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ လက်ရှိသီအိုရီအရ dopamine ယန္တရားများသည်နှစ်သက်မှုနှင့် opioid ယန္တရားများကိုလိုလားနေသည်။ စွဲလမ်းမှုသည်အလွန်လိုချင်။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြားမှသင်ဆက်လက်သုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: ချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများ: 'အကြိုက်', 'လို' နှင့်သင်ယူမှု
Curr Opin Pharmacol ။ 2009 ဖေဖော်ဝါရီလ;9(1): 65-73 ။
2009 ဇန်နဝါရီလ 21 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.coph.2008.12.014 ။
Kent ကို C Berridge, တယ်ရီ, E ရော်ဘင်ဆင်, နှင့် J ဝိန်း Aldridge
စိတ်ပညာဌာန, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, အမ်း Arbore, 48109-1043, အမေရိကန်နိုင်ငံနေရပ်လိပ်စာ
သက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာ: Berridge, Kent, C (Email: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်])
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုအကျိုးကို၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများ delineating ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ': ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ခေတ္တဆုလာဘ်သုံးခု dissociable စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်တွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြlike နှိပ်'(hedonic သက်ရောက်မှု),' 'ချို့တဲ့'(မက်လုံးပေး salience) နှင့် သင်ယူမှု (ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်သိမြင်မှု) ။ အကျိုးကို၏အစိတ်အပိုင်းများ, သူတို့၏ neurobiological အလွှာတစ်ပိုကောင်းနားလည်မှု, စိတ်ကျရောဂါကနေပုံမမှန်, မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆုလာဘ်၏ဆက်စပ် compulsive ရေးရာအစာစားခြင်းအထိစိတ်ဓါတ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပုံမမှန်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုကြံစည်အတွက်အကူအညီပေးနိုငျသညျ။
နှင့်အရှင်ဝေါဟာရကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးထုတ်လုပ်ရန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ဖြစ်ရပ်များကိုရည်ညွှန်းဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ - ကအပျော်အပါးတစ်သတိအတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအများစုများအတွက် '' ဆုလာဘ် '' တပ်မက်လိုချင်သောအရာဖွစျသညျ။ ဒါပေမဲ့သက်သေအထောက်အထားပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးဆုလာဘ်များထဲမှအစိတ်အပိုင်းပေမယ့်ဖြစ်ပြီး, ဆုလာဘ်ပင်သူတို့ထဲကသတိရှိရှိသတိထားဖြစ်ခြင်း၏မရှိခြင်းအတွက်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်ဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်းအမှန်မှာအတှငျးအမှန်တကယ်တခါတရံ [ဆုလာဘ်ကြိုက်တယ်နေကြသည်သောအတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်1].
အစွန်းရောက်အနေဖြင့် hedonic လှုံ့ဆော်မှုများကိုသတိမပြုမိခြင်းသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သော 'အကြိုက်' တုံ့ပြန်မှုများကိုပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုခံစားရခြင်းမရှိပဲအပြုအမူ (သို့) ဇီဝကမ္မဗေဒဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်2,3] ။ ဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာသော်လည်းထို့ကြောင့်, ဆုလာဘ်မှ '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှု၏ရည်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတခါတရံပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများထက် hedonic စနစ်များကိုပိုမိုတိုက်ရိုက် access ကိုပေးလိမ့်မည်။
အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience များအတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိမရှိ, အလွှာအပျြောအပါးဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဦးနှောက်ကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Neuroimaging နှင့် accumbens ချိုမြိန်အရသာကနေသွေးကြောသွင်းကင်းအထိဆုလာဘ်, ပိုက်ဆံအနိုင်ရတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြုံးမျက်နှာထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယအဖြစ် orbitofrontal cortex, anterior cingulate နှင့် insula အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ, နှင့် subcortical အဆောက်အဦများကိုသက်ဝင်သည်ဟုတွေ့ပြီ၏အာရုံကြောမှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများ, ventral pallidum, ventral tegmentum နှင့်စသည်တို့ကို mesolimbic dopamine Project, amygdala [4 •,5,6,7 ••,8,9 •,10 •,11-13].
သို့သော်ထို ဦး နှောက်စနစ်များမှမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သနည်း။ အဘယ်လုပ်ဆောင်မှုများအစားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့် network activation ပြန့်ပွားခြင်းကြောင့်) သို့မဟုတ်အပျော်အပါး၏အကျိုးဆက်များ (အကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သောအခြားသိမြင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ မော်တာစသည်တို့ကိုအစားထိုးရန်) ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားသူများသည်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင် hedonic သက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် ဦး နှောက်အားကိုင်တွယ်ခြင်းအားဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အပျော်ခရီးကိုရှာဖွေသည်။6,14 ••,15,16,17 •,18-22].
ဆုလာဘ်၏ hedonic သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိအာရုံကြောစနစ်များကိုလေ့လာဖို့, ငါတို့နှင့်အခြားသူများထိုကဲ့သို့သောမွေးကင်းစလူ့မွေးကင်းစနှင့်ပင် orangutans, ချင်ပန်ဇီမျောက်, မျောက်နှင့်များ၏ homologous မျက်နှာတုံ့ပြန်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်စေမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအဖြစ်ချိုမြိန်အရသာဆုလာဘ်မှရည်ရွယ်ချက် '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုအမြတ်ထုတ်ကြ ကြွက်များနှင့်ကြွက်များ [4 •,18,23,24] ။ ခါးသောအရသာအစားအသုံးအနှုနျးမြား (ပစပ်ဟ, စသည်တို့ '' disliking '' အနုတ်လက္ခဏာထုတ်ယူသော်လည်းသကြားလုံး, ဤ (စသည်တို့ကိုနှုတ်ခမ်းကိုလျက်, စည်းချက်လျှာကို protrusions) ၏အားလုံးအတွက်အပြုသဘောမျက်နှာ '' အကြိုက် '' အသုံးအနှုန်းတွေထုတ်ယူ .; ပုံ 1; ဖြည့်စွက်ရုပ်ရှင် 1) ။ ထိုကဲ့သို့သော '' အကြိုက် '- ကိုမြည်းစမ်းဖို့တုံ့ပြန်မှု' 'disliking က' forebrain နှင့် brainstem အတွက် hedonic သက်ရောက်မှုများအတွက်ဦးနှောက်စနစ်များတစ်ဦးအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ထားကြသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု / မွတ်မပြေခြင်းနှင့်သင်ယူအရသာဦးစားပေးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိအဖြစ်သာယာသောပြောင်းလဲများစွာကိုအချက်များ, ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်အမူအကျင့် '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုနှင့်အာရုံခံအပျော်အပါးအဘို့အဦးနှောက် hedonic ဟော့စပေါ့။ ထိပ်တန်း: အပြုသဘောဆောင်သော hedonic '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုလူ့မွေးကင်းစကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် (ဥပမာစည်းချက်လျှာကို protrusion) မှ sucrose အရသာအားဖြင့်ရူးနှမ်းနေကြသည်။ ...
သာအနည်းငယ် neurochemical စနစ်များကိုကြွက်အတွက်ချိုမြိန်အရသာမှ '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်ယခုအထိရှာတွေ့, သာအနည်းငယ်နေရဦးနှောက်နေရာများအတွင်းပါပြီ။ Opioid, endocannabinoid နှင့်ဂါဘမြို့သား-benzodiazepine neurotransmitter စနစ်များ [ပျြောမှေ့စတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ဘို့အရေးကြီးပါသည်14 ••,15,16,17 •,25,26], အထူးသဖြင့် limbic အဆောက်အဦများအတွက်တိကျသောက်ဘ်ဆိုက်များမှာ (ပုံ 1 နှင့် ပုံ 2) [15,16,17 •,21,27] ။ သူတို့ '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှု၌၎င်း, အခြ, အပျော်အပါးအားဖြင့် Generating တိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များ '' hedonic ဟော့စပေါ့ '' ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ အာရုံခံအပျြောအပါး၏ opioid တိုးမြှင့်မှုအတွက်တစ်ခုမှာ hedonic ဟော့စပေါ့ [ယင်း၏ medial shell ကို, volume ထဲမှာအကြောင်းကိုကုဗမီလီမီတာ၏ rostrodorsal quadrant အတွင်းနျူကလိယ accumbens တွင်တည်ရှိသည်14 ••,15,28].
ဆိုလိုသည်မှာ hotspot တွင် medial shell ပမာဏ၏ ၃၀% သာရှိပြီးနျူကလိယတစ်ခုလုံး၏ ၁၀% အောက်သာရှိသည်။ ထို hedonic hotspot အတွင်းတွင် mu opioid agonist DAMGO ၏ microinjection သည် sucrose အရသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော 'အကြိုက်' တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်ကိုနှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆတိုးစေသည်။14 ••,28] ။ နောက်ထပ် hedonic ဟော့စပေါ့ [နောက်တဖန် DAMGO အစွမ်းထက် sweetness မှ '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးရှိရာ ventral pallidum ၏ posterior ထက်ဝက်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်17 •,21,28] ။ နှစ်ဦးစလုံးဟော့စပေါ့များတွင်တူညီသော microinjection လည်းအပြုအမူနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအစာစားခြင်းလှုံ့ဆော်၏သဘောအရစားစရာဘို့ '' လို '' နှစ်ဆတိုး။
နျူကလိယအတွက် mu opioid ဟော့စပေါ့၏ချဲ့ထွင်မှု '' လို '' ဇုန်နှိုင်းယှဉ် '' အကြိုက် '' ၏ delineation နှင့်အတူ accumbens ။ အစိမ်းရောင်: တစ်ခုလုံးကို medial shell ကိုအစားအစာအကျိုးသည် '' လို '၌ opioid-နှိုးဆွတိုး mediates ။ ...
သူတို့အဟော့စပေါ့၏အပြင်ဘက်တွင်ပင်အတူတူပင်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ opioid စိတ်ကြွဆေးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, NAc မှာလုံးဝနီးပါးရှိသမျှသည်အခြားသောနေရာများ DAMGO microinjections နေဆဲဟော့စပေါ့များတွင်သလောက်စားစရာဘို့ '' လို '' လှုံ့ဆော်ပေမယ့် '' အကြိုက် '' မြှင့်တင်ရန် (နှင့်ပင် medial shell ကိုစဉ်များတွင်တစ်ဦးထက်ပို posterior coldspot တွင် 'အကြိုက်' 'ဖိနှိပ်ဘူး နေဆဲအစားအစာစားသုံးမှုကိုနှိုးဆွ; ပုံ 2) ။ ထို့ကြောင့် NAc medial shell ကိုအတွက်ဟော့စပေါ့ဒါမှမဟုတ်အပြင်ဘက် mu opioid လှုပ်ရှားမှုများ၏သက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ် [ 'အကြိုက်' 'များအတွက်တာဝန်ရှိ opioid က်ဘ်ဆိုက်များကြောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု' 'လို' 'သူတို့အထဲကနေခန္ဓာဗေဒ dissociable ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ14 ••,16].
Endocannabinoids [သည့် mu opioid site ကိုထပ်နေသည်တဲ့ NAc ဟော့စပေါ့များတွင် '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်16,27] ။ အဆိုပါ endocannabinoid ဟော့စပေါ့များတွင် anandamide ၏ Microinjection ရှိ CB1 receptors ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကောင်းသရုပ်ဆောင်, ထက်ပိုပြီး '' အကြိုက် '' sucrose အရသာမှတုံ့ပြန်မှု (နှစ်ချက်အစားအစာစားသုံးမှုထက်ပို) ၏အဆင့်ကိုနှစ်ဆတိုး။ အဝလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အခါဒီ hedonic endocannabinoid အလွှာ [endocannabinoid ရန်၏ဆေးသက်ရောက်မှုမှဆက်စပ်ခြင်းငှါ16,29,30].
အဆိုပါ ventral pallidum နျူကလိယတစ်ဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပစ်မှတ်အကျိုးရလဒ်များ accumbens သည်နှင့်၎င်း၏ posterior တစ်ဝက် [ဒုတိယ opioid ဟော့စပေါ့ပါရှိသည်17 •,21] ။ အဆိုပါ pallidum ဟော့စပေါ့များတွင် sucrose အဘို့, DAMGO ၏ microinjections နှစ်ဆ '' အကြိုက် 'နှင့်အစားအစာ (စားသုံးမှုအဖြစ်တိုင်းတာ) အတွက်' 'လို' '။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အဟော့စပေါ့မှ DAMGO anterior ၏ microinjection '' အကြိုက် '' ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် '' လို '' ။ အတော်လေးလွတ်လပ်စွာ, 'လို' 'ဂါဘမြို့သားများပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့် ventral pallidum အားလုံးကိုနေရာများမှာသီးခြားစီနှိုးဆွနေသည်A မည်သည့်တည်နေရာမှာ '' အကြိုက် '' ပြောင်းလဲမပါဘဲ bicuculline microinjection မှတဆင့် receptors [17 •,31].
'' အကြိုက် 'နှင့်ဆုလာဘ်များကသွေးဆောင်အာရုံကြော activation ၏လေ့လာမှုများအဘို့အထူးအကျိုးစီးပွားက' 'လို' ၌ ventral pallidum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လူသားမြားသညျတှငျ, ကင်း, လိင်, အစားအစာ, သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအားလုံး [ကြွက်များတွင် hedonic ဟော့စပေါ့မှကိုက်ညီသော posterior မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအပါအဝင် ventral pallidum, ကိုသက်ဝင်ဆု9 •,10 •,11,21] ။ အဆိုပါ posterior ventral pallidum အတွက်အာရုံခံကြွက်များတွင် hedonic အချက်ပြမှုများဝှက်ဘယ်လိုအသေးစိတ် electrophysiological လေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့ဟော့စပေါ့အာရုံခံ [အနေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်ငန်အရသာ (ပင်လယ်ရေ၏သုံးဆသည့်အာရုံစူးစိုက်မှု) ကိုထက် sucrose ၏ချိုမြိန်အရသာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ7 ••] ။ သို့သော်၊ သူ့ဟာသူ sucrose နှင့်ဆားများကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောပစ်ခတ်မှုသည်ကွဲပြားမှုသည်အာရုံခံများသည်သူတို့၏လှုံ့ဆော်မှု၏အခြေခံအာရုံခံအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမျှသာဟုပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲသူတို့၏နှိုင်းယှဉ်ချက် (disliking) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် hedonic သက်ရောက်မှုကို encode ကြောင်းသက်သေပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ) ။
NaCl အရသာ၏သာယာမှုကိုရွေးချယ်သည့်ဇီဝကမ္မဆားစားသုံးမှုအားဖြင့်လှည့်စားသောအခါအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆွေမျိုး hedonic တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲကိုခြေရာခံသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြွက်များသည်ဆိုဒီယမ်ကုန်ခန်းသောအခါ (mineralocorticoid ဟော်မုန်းနှင့် Diuretic အုပ်ချုပ်မှုတို့မှ) ဆားငန်သောအရသာသည်သန္ဓေသားကဲ့သို့အမူအကျင့်အားဖြင့်“ ကြိုက်နှစ်သက်သော” ဖြစ်လာပြီး ventral pallidum ရှိအာရုံခံများကဆားကိုပြင်းထန်စွာစတင်ဆားခန့်ဆောင်ကြသည်။7 ••] (ပုံ 3) ။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်, အကယ်စင်စစ်ဤ ventral pallidal အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများ [သာယာသောအာရုံခံစားမှုအဘို့အ hedonic '' အကြိုက် 'ထက်ရိုးရှင်းတဲ့အာရုံခံအင်္ဂါရပ်များကိုဝှက်ကြောင်းညွှန်ပြထင်ပါတယ်21,32].
ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ငန်အရသာ၏အာရုံခံအပျော်အပါးအတွက် 'အကြိုက်' '၏အာရုံခံနိုင်တဲ့ coding ။ အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးကြွက်၏နှုတ်တော်ထွက်သို့ထုံမွှန်း sucrose နှင့်ပြင်းထန်သောဆားအရသာတစ်ခု ventral pallidum မှတ်တမ်းတင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကနေပြသလျက်ရှိသည်။ နှစ် ...
ဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဝေ Hedonic ဟော့စပေါ့ function အတူတကွကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကျွန်းစု၏မျိုးစုံကျွန်းများကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့, မျိုးစုံ forebrain နှင့် brainstem ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံ hierarchical ဆားကစ်သို့အတူတကွနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ [21,24,27] ။ ventral forebrain အတွက် limbic အဆောက်အဦများ၏အတော်လေးမြင့်မားသောအဆင့်တွင် accumbens နှင့် ventral pallidum အတွက်ဟော့စပေါ့တို့က '' အကြိုက် '' ၏တိုးမြှင့်နှစ်ဦးစလုံးဟော့စပေါ့များကတညီတညွတ်တည်း '' မဲ '' လိုအပ်နေ, တစ်ခုတည်းသမဝါယမ heterarchy အဖြစ်အတူတကွပြုမူစေခြင်းငှါ  ။ အဆိုပါ NAc ဟော့စပေါ့တို့က '' လို '' amplification [ပိုများသောကြံ့ခိုင်ခဲ့များနှင့် VP ဟော့စပေါ့ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်ဆက်ရှိနေပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်တဦးတည်းဟော့စပေါ့၏ opioid ဆွခြင်းဖြင့် hedonic amplification အခြားဟော့စပေါ့မှာ opioid အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်နှောင့်အယှက်နိုင်ပါသည်28].
'liking' ၏အခြေခံအလားတူအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် opioid နှင့် benzodiazepine (နောက်ကွယ်မှ parabrachial နျူကလိယနှင့် ပါတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သည်) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။27] ။ က naloxone အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်တားဆီးသည်ကို ထောက်. benzodiazepine အုပ်ချုပ်ရေးကထုတ်လုပ်အဆိုပါ '' အကြိုက် '' တိုးမြှင့် [endogenous opioids ၏တာဝန်စုဆောင်းမှုလိုအပ်ဟန်33] ။ ထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်း hedonic circuit ကို '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပျော်မွေ့ potentiate မှမျိုးစုံ neuroanatomical နှင့် neuro-ဓာတုယန္တရားများအတူတကွပေါင်းစပ်လိမ့်မည်။
'' လိုသော '
အများအားဖြင့်ဦးနှောက်က '' လိုသည် '' သောဆုလာဘ် '' likes '' ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပဲသူတို့ကို 'ချင်' 'လိမ့်မည်။ သုတေသန '' အကြိုက် 'နဲ့' လို '' ဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiologically dissociable ဖြစ်ကြောင်းထူထောင်ခဲ့သည်။ '' လို '' အားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုဆိုလိုတာ မက်လုံးပေး salience, ဆီသို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များစားသုံးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်များနှင့်အရာကွဲပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological features တွေရှိကြောင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား။ ဥပမာအားဖြင့်, မက်လုံးပေး salience declarative ဟူ. ရည်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်အနာဂတ်ရလဒ်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမျှော်လင့်ချက်များပါဝင်ကြောင်းလိုသောသာမန်စကားလုံးဆိုလိုဆန္ဒပိုပြီးသိမြင်မှုပုံစံများ, ကနေသိသာစွာကွဲပြားသည်, အရာအဓိကအား [cortical ဆားကစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်34-37].
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်မက်လုံးမက်ဘိုက်ဘစ် dopamine စီမံချက်များပါ ၀ င်သည့်မျိုးစိတ်ခွဲခြားထားသည့်အာရုံကြောစနစ်များကမက်လုံးမက်မောမှုကိုအဓိကကျသည်မှာအသေးစိတ်ကျသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များမလိုအပ်ပါ။34,35,38] ။ ထိုကဲ့သို့သောမက်လုံးပေး-sensitive နှငျ့ပတျသကျသောစွဲလမ်းအဖြစ်ကိစ္စများတွင်မက်လုံးပေး salience နှင့်ပိုပြီးသိမြင်မှုအလိုဆန္ဒများအကြားခြားနားချက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ '' လို '' အဓိပ်ပါယျမရှိသောဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ကြောင်းအဘယျသို့ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်သည်, တစ်ဦးသိမြင်လိုချင်မရဘာအတွက် 'ချင်' အလွန်အကျွံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ မက်လုံးပေး salience [39 •,40 •,41].
ပင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု (ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု, UCSs) မှသို့မဟုတ်မူလကကြားနေခဲ့သင်ယူလှုံ့ဆော်မှုလျှောက်ထားပေမယ့်ယခုဆုလာဘ် UCSs (Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှု, CSS) ၏ရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် '' လိုသော '[38,40 •] ။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး CS Pavlovian လှုံ့ဆော်မှု-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များ (S-S ကသင်ယူမှု) ကနေတဆင့်တစ်ဦးပင်သို့မဟုတ် 'သဘာဝက' 'ဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုနှင့်အတူတွဲသောအခါ CSS မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးသည်။ မက်လုံးပေး salience [ 'လို' 'တစ်ဦး CS ဆွဲဆောင်မှုအောင်နှင့်သရုပ်ြပများနှင့်အကျိုးကိုဆီသို့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူလမ်းညွှန်များ၏ယခုအချိန်တွင်သူတို့အားအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်သို့ဆွဲကြောင်း limbic ယန္တရားများအားဖြင့်သူတို့အား CSS မှစွပ်စွဲဖြစ်35].
တစ်ဦး CS မက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲသောအခါသူကပုံမှန်အားဂုဏ်သတ္တိများ '' လို '' ကွဲပြားနှင့်တိုင်းတာရရှိသည် [35,42], အ CS Re-ကြုံတွေ့ (ဆုလာဘ်တွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပုံရိပ်ကိုလည်းအထူးသဖြင့်လူသားမြားသညျအတွက်လောက်ပေပေမယ့်) ကိုယ်ထိလက်ရောက်အခါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်ရာ။ ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်တွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးအဆိုပါ '' လို '' ဂုဏ်သတ္တိများအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
မက်လုံးပေး salience ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက်အင်္ဂါရပ်။ တစ်ဦးက CS မက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲ, ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် (ကျွမ်းလောင်သော '' စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက် '' တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, motivationally စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လာဖြည့်စွက် Movie, 1) [43,44 •,45] ။ CS မက်လုံးပေးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက်အင်္ဂါရပ် [တဲ့ CS ပင် compulsive ချဉ်းကပ်ကျလာသောစေခြင်းငှါဤမျှအစွမ်းထက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်46] ။ သူတို့ကင်းမဟုတ်ကိုသိအဖြူ granules ပြီးနောက်တခါတရံအသညျးအ '' Chase သရဲတစ္ဆေ 'သို့မဟုတ် Scrabble ဥပမာ, ကိုကင်းစွဲ Crack ။
Cue-ဖြစ်ပေါ်အမေရိကန်အင်္ဂါရပ် '' လို ''။ အကျိုးကိုများအတွက် CS နဲ့တှေ့ဆုံလည်း [Associates ဟာပျက်ကွက်ဆုလာဘ်ကိုယ်စားနှင့်ဆက်စပ်မရှိဟုယူဆရမက်လုံးပေး salience ၏အပြောင်းအရွှေ့ကနေတဆင့်, ကိုယ်ပိုင်ဆက်စပ် UCS ဘို့ '' လို '' ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း34,47,48] ။ တိရိစ္ဆာန်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်, ဒီအများအားဖြင့်အထူးသတွင်းကိုကိုခေါ်စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်သုဉ်းအခြေအနေများအောက်တွင်ကောက်ယူ Pavlovian-တူရိယာဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းအတွက်အကဲဖြတ်သည့်ပျက်ကွက်ဆုလာဘ်အလုပ်လုပ်အတွက် cue-ဖြစ်ပေါ်တိုး (တစ် phasic အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ထငျရှား; ပုံ 4) ။ အဆိုပါ cue-ဖြစ်ပေါ်လွန်း (ဖြစ်ကောင်းအဖြစ် sensitized သောအခါအစွဲသို့မဟုတ် dopamine-dysregulation လူနာ compulsive လောင်းကစားဝိုင်းပြသည်အခြားဆုလာဘ်အတွက် 'လို' ဆိုတဲ့ဆက်စပ်အကျိုးသည်အတော်လေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ဆွဲဆောင်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျလမ်းအတွက်ကျော်ဖိတ်နိုင်ပါတယ် '' လို ', လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်အပြင်အပြုအမူ, etc,) [49,50] ။ မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုသည် dynamically ဆုလာဘ်ထွက်ရှာလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်, သူတို့သည်အလွန်ရှာဖွေကြသည်တရာနှင့်အတူသန်စွမ်း, တွေကိုစွဲလမ်းအတွက် relapse ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူထို့ကြောင့်ရင်ဆိုင်။
cue-ဖြစ်ပေါ်၏ NAc စိတ်ကြွဆေး amplification '' လို။ ' sucrose အကျိုးသည် '' လို '' ၏ယာယီထိပ်တစ်ဦး Pavlovian-တူရိယာဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းစမ်းသပ်မှု (; ညာဘက် CS +) အတွက် Pavlovian sucrose cue ၏ 30-s ကိုပွဲခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေကြတယ်။ ...
အေးစက်စစ်ကူအင်္ဂါရပ်။ မက်လုံးပေး salience ကိုလည်း CS ဆွဲဆောင်မှုကိုတစ်ဦးချင်းကိုတောင်အမေရိကန်ဆုလာဘ်များမရှိခြင်း၌, CS သူ့ဟာသူရရှိရန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သောသဘော '' လိုခငျြ '' ။ ဤသည်ကိုမကြာခဏဆာပ conditional အားဖြည့်ဟုခေါ်တွင်သည်။ အလားတူပင်, ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်နီကိုတင်းအဖြစ်အမေရိကန်အကျိုးသည်လာသောအခါတိရစ္ဆာန်အကျင့်ကိုကျင့်ရရှိခဲ့သည်ဘာတစ်ခု CS ဖြည့်စွက်ခြင်း, CS တစ်ဦးအပိုဆောင်းဖြည့်စွက်ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကို avidly တိုးပွါးပစ်မှတ် '' လိုခငျြ ' ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ conditional အားဖြည့်သည့်ဆာတာဝန်ဆည်းပူးဖို့အပိုဆောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့ယန္တရားများလိုအပ်နေ, 'လို' 'ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒါ့အပြင်အခြားရွေးချယ်စရာ SR ယန္တရားများမှာအားလုံးမက်လုံးပေး salience မပါဘဲအချို့သောအခြေအနေများတွင် conditional အားဖြည့်ဖျန်ဖြေပေလိမ့်မည်။ ဒါကစိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက်နှင့် cue-ဖြစ်ပေါ်အလွန်အကျွံမက်လုံးပေး salience ၏မှတ်ပုံတင်ဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဂုဏ်သတ္တိများ '' လို '' ကိုမှန်ကန်စေသည်။
မက်လုံးပေး salience ၏ extensions
လှုပ်ရှားမှု salience? ကျွန်တော် '' လို '' ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ features တွေစွန့်ခွာခြင်းမပြုမီ, ငါတို့အချို့အမူအကျင့်မှနျးဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေကြ လုပ်ရပ်တွေကိုသို့မဟုတ်မော်တာအစီအစဉ်များ ထို့အပြင်နီးပါးမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများကဲ့သို့ '' လိုခငျြ '' ဖြစ်လာစေခြင်းငှါ, မက်လုံးပေး salience တစ်ပုံစံမှတဆင့်အတွင်းပိုင်းလှုပ်ရှားမှုများထက်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုကိုယ်စား၏ဦးနှောက်ကိုယ်စားပြုဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ '' အရေးယူ salience 'သို့မဟုတ်ဆောင်ရွက်ရန်' 'လို' ဒီစိတ်ကူးကိုခေါ်ပါ။ ကျနော်တို့အကြံပြုလှုပ်ရှားမှု salience မက်လုံးပေး salience stimulus တစ်မော်တာညီမျှဖြစ်, နှင့် (ventral mesolimbic သူတွေနဲ့အတူထပ်ကြောင်းဥပမာ dorsal nigrostriatal dopamine စနစ်များ) ဦးနှောက်စနစ်များထပ်ကကမကထပြုခဲ့ပေမည်။ ဖြစ်ကောင်း neostriatum အတွင်း Blend မော်တာနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို (စလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လူသိများနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ) နှငျ့ပတျသကျသောလုပျဆောငျဖို့ရမ္မက်၏မျိုးဆက်, Basal ganglia function ကိုအကြောင်းကိုအတွေးအများအပြားပေါ်ထွက်လာလိုင်းများနှင့်ကိုက်ညီပုံရသည် [52,53,54 •,55].
အလိုရှိကြသည်တွင်ကြောက်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်? နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ [မက်လုံးပေး salience လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သော salience နှင့်အတူ mesocorticolimbic ယန္တရားများအတွက်ဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာကျောထောက်နောက်ခံပြုဝေမျှစေခြင်းငှါသတိပြုပါ56,57 •,58,59] ။ ဥပမာအားဖြင့်, နျူကလိယအတွက် dopamine နဲ့အချိုမှု interaction ကဆားကစ်ဆင့်ကဲဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောသော့၏နှောင့်အယှက်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောအမူအကျင့်သာရှိပြီးပြည်ပမှအစာစားချင်စိတ်များ incremental ရောနှောထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်တစ်ဦးထိခိုက်စေကီးဘုတ်, [အဖြစ် Anatomical ဖွဲ့စည်း, သာအလိုဆန္ဒမရ generate, ဒါပေမယ့်လည်းကြောက် accumbens57 •] ။ ထို့ပြင်ယင်းနျူကလိယ accumbens တချို့သည်ဒေသခံ '' သော့ '' စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပထိခိုက်စေဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို (တောက်တောက် raucous ရော့ခ်ဂီတနှင့်အတူ lit နှင့်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတဦးတည်းမှတစ်ဦးအဆင်ပြေနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဥပမာအပြောင်းအလဲ) ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မှတဦးတည်းလှုံ့ဆော်မှုထုတ်လုပ်ကနေပြန်လှန်နိုင်ပါသည် .
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော 'liking' သို့မဟုတ် 'wanting' လုပ်ဆောင်မှုများအားအာရုံကြောဓာတုအထူးပြုမှုများသို့မဟုတ်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာနေရာချထားမှုများသည်အမြဲတမ်းဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော 'တံဆိပ်ကပ်ထားသောလိုင်း' ယန္တရားများအား 'အလွှာတစ်ခု = လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု' ကိုထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့၏ neurobiological အလွှာများ၏အထူးပြုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်များ (ဥပမာ hedonic hotspots) သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု - valence ဘက်လိုက်မှု (ဥပမာအလိုဆန္ဒ - ကီးဘုတ်ကီးဘုတ်) ကိုထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ သူတို့အားအလွှာအချို့သည်အခြားသောတစ်ပြိုင်နက်တည်းအချက်များပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်အလိုဆန္ဒနှင့်ကြောက်လန့်မှုကဲ့သို့သောဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
'' လို 'အဘို့အ Neurobiological အလွှာ
'' အကြိုက် '' မှ '' လို '' ၏ neurobiology နှိုငျးယှဉျ, ငါတို့ [ပိုများသောကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာ '' အကြိုက် '' အဘို့အအလွှာထက် activated နေကြတယ် '' လို '' အဘို့အကြောင်းဦးနှောက်အလွှာကိုသတိပြုပါ38,53,60,61 •,62-65] ။ Neurochemical '' လို '' ယန္တရားများဖြစ်ကောင်းညီတူညီမျှ '' အကြိုက် '' အတူတူပင်ဆုလာဘ်မပါဘဲအကျိုးကို '' လို '' ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းများအတွက်အခြေခံဖြစ်သော, neurochemical နှင့် neuroanatomical နှစ်ဦးစလုံး domains များပိုမိုများပြားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ opioid စနစ်များအပြင်, corticolimbic အချိုမှုများနှင့်အခြား neurochemical စနစ်များနှင့်အတူ dopamine နဲ့ dopamine interaction က '' လို '' မက်လုံးပေး salience ကိုသက်ဝင်။ သူတို့အားစနစ်များတချို့၏ Pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးအလွယ်တကူ '' အကြိုက် '' ပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲ '' လို '' ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, endogenous dopamine neurotransmission ၏ဖိနှိပ်မှု '' အကြိုက် '' လို '' သော်လည်းမလျော့နည်းစေ [38,64].
အပြန်အလှန်အားဖြင့် 'လိုချင်ခြင်း' မရှိဘဲ 'လိုချင်ခြင်း' ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအား dopamine စနစ်များကို amphetamine သို့မဟုတ်အလားတူ catecholamine-activating မူးယစ်ဆေးဝါးများမှစနစ်တကျသို့မဟုတ် microinjected နျူကလိယနျူကူကူဘင်သို့တိုက်ရိုက်ဆင့်ပွားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ mesocorticolimbic ဆားကစ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မြင့်မားသောဆေးများကိုထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် mesocorticolimbic-dopamine-related စနစ်များ၏အနီးကပ် - အမြဲတမ်း sensitization အားဖြင့် (ထို synapse အတွက် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ knockdown)ပုံ 3-ပုံ 5) [39 •,40 •,61 •,66] ။ ကျနော်တို့ [ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်မက်လုံးပေး salience များ၏အာရုံကြောာင်းတူညီတဲ့မူးယစ်ဆေး correspondingly '' ကြိုက်တယ် '' နေကြသည်ဖြစ်စေမပိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကို ယူ. , အရှင် addiction အထောက်အကူပြုရန် '' လို '' compulsive generate စေခြင်းငှါအဆိုပြုထားကြပါပြီ39 •,40 •,42] (ပုံ 5).
စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-sensitive မော်ဒယ်။ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့စှဲလမျးသူဖြစ်လာအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများယူ '' လို '' မူးယစ်ဆေးဝါးအပျော်အပါးများအတွက်လွတ်လပ်စွာ '' အကြိုက် '' ၏အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးပွားမည်အကြောင်းမည်သို့သိထားမော်ဒယ်။ ပေါ့ပေါ့မူးယစ်ဆေးဝါးကနေအကူးအပြောင်း ...
ဆုလာဘ်-related တွေကိုမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများနှိုင်းယှဉ်သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်: 'လို' 'ကနေသင်ယူချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ
ဆုလာဘ်-related တွေကိုလေ့လာသင်ယူကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုတွေကိုပုဆုလာဘ်ရရှိရန် '' လို '' သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပြင်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ပေါ်။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင် '' လို '' ဖြစ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများပါဝင်ပတ်သက်နေသလဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင် [သင်ယူခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မက်လုံးပေး salience ရုံ '' အကြိုက် '' အဖြစ်, ဆိတ်ကွယ်ရာသရုပျခှဲနိုင်ပြီးနိုင်ပါတယ် '' လို '' သောကွောငျ့ဖွစျသညျ37,38,39 •,41,46,61 •] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်၎င်းတို့၏ neurobiological အလွှာ parsing ဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စမ်းသပ်မော်ဒယ်များများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်တယ်, စွဲအပါအဝင်ရောဂါဗေဒအဘို့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေတ္တဆုလာဘ်-related တွေကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ dissociable ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသောငါတို့ဓါတ်ခွဲခန်းကနေသက်သေအထောက်အထားသုံးခုလိုင်းများကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
သည်သူတို့ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဆွဲ, တစ်ဦး '' စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက် '' အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် - ပထမဥပမာ CSS ချဉ်းကပ်ထုတ်ယူနိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြစမ်းသပ်ချက်ကနေလာပါတယ်။ အတော်များများကစမ်းသပ်ချက်အုတ်ရိုးထိုကဲ့သို့သောလီဗာ၏သွင်းအဖြစ်တဲ့အခါ cue သို့မဟုတ် 'နိမိတ်လက္ခဏာ' (CS), ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်တစ်ဦးကြိုးအမေရိကန်၏တင်ပြချက်နှင့်အတူတွဲကြောင်းထူထောင်ကြပါပြီ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် [သည့် cue ချဉ်းကပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လေ့43,44 •] ။ လှုံ့ဆျောမှုကနေကွဲပြားခန့်မှန်းဖို့အဓိကသော့ချက် [တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အခြေအနေကတုန့်ပြန် (CR) ၏သဘောသဘာဝတည်ရှိသည်43].
တင်ဆက်မှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ကြွက်အချို့သည်လီဗာကို ပို၍ လျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်ကြပြီးယင်းကိုကိုက်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်းများနှင့်ကိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့်လီဗာကိုအားတက်သရောလိုက်ပါဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ဖြည့်စွက် Movie, 1)  ။ ကိုကင်းဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းတစ် cue အလားတူ [ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှား sniffing အပြုအမူ၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနှင့်အတူပါဝင်နေသည်44 •] သူတို့ကိုစွဲကိုဆွဲဆောင်, maladaptive ဖြစ်လာမှမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုစွမ်းရည်များအတွက်အကောင့်ရသော။ အဆိုပါ CS သူ့ဟာသူဆီသို့ညွှန်ကြားထိုသို့သော CRS '' နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်း '' ဟုခေါ်ကြသည်။
သို့သော်အားလုံးကြွက်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ-ခြေရာခံ CR ဖွံ့ဖြိုးဘူး။ ပင်အတူတူပင်စမ်းသပ်အခြေအနေမှာအချို့ကြွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား CR ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် - သူတို့က '' ရည်မှန်းချက် '(အစားအစာဗန်း), မလီဗာ-CS တင်ပြထားပါသည်အခါလီဗာ, ချဉ်းကပ်ဖို့သင်ယူပါ။ ဤသည် CR '' ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံခြင်း '' ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်နှင့်အတူ [အတွေ့အကြုံကိုရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံသည့်လီဗာ-CS ၏တစ်ဦးချင်းစီတင်ဆက်အပေါ်သို့ ပို. ပို. လျှင်မြန်စွာပန်းတိုင်သို့ချဉ်းကပ်ခြင်းငှါလာကြ, သူတို့ avidly အစားအစာဗန်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုစတင်, nibbling, ပင်ကကိုက်43,44 •,45] ။ ကြွက်အားလုံးအတွက် CS (lever insertion) သည်တူညီသောကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည် sign-tracking CRs နှင့် goal-tracking CRs တို့ကိုအစပျိုးစေသည်။
တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ CR ကိုညွှန်ကြားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကနိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသူများအတွက် lever-CS ကိုမက်လုံးများလွန်းခြင်းဟုမှတ်ယူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သူတို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသူများသည်အထူးသဖြင့် CS ရရှိရန်တုံ့ပြန်မှုအသစ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်ယူလိမ့်မည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်။ အားဖြည့်)  ။ ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံများအတွက် CS အစားအစာခန့်မှန်းထားသည်နှင့် CR ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ပေမယ့် CS ကိုယ်တိုင်ကထိုအနည်းလမ်းတွေထဲမှာမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲခံရဖို့မထင်ထားဘူး (ဘာမှလျှင်အစား, ပန်းတိုင် '' လိုခငျြ '' ဖြစ်ပါတယ်) [43,46] ။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက် [တစ်သင်ယူ CS ၏အကျိုးကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကတက်ကြွစွာမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲနေပါတယ်ရှိမရှိပေါ် မူတည်. ၎င်း၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးကနေ dissociated စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုနှင့်ကိုက်ညီများမှာ46].
မက်လုံးပေး salience ကနေခန့်မှန်းဆန်းစစ်ဖို့သက်သေသာဓကများတစ်ဦးကစက္ကန့်လိုင်းကိုအထူးသဖြင့် dopamine-related ဦးနှောက် Active (စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကြိုတင်ာင်းအားဖြင့်) ပြီးနောက်, အာရုံကြော codes တွေကို '' လို '' ၏လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။ Dopamine မြင့်အထူးအကျယ်ချဲ့မက်လုံးပေး salience ဝှက်ကြောင်းအချက်ပြမှ limbic အာရုံကြောပစ်ခတ်ရန်မြှင့်တင်ရန်ပုံ (ပုံ 6) [61 •] ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, dopamine activation ကြောင်းကုဒ်အလုပျသခန့်မှန်းချက် [အာရုံကြောအချက်ပြမြှင့်တင်ရန်ဘူး61 •].
(ထိခိုက်လွယ်သို့မဟုတ်စူးရှစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်) mesolimbic activation အားဖြင့် CS ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုး (သင်ယူမှု) မှ CS မက်လုံးပေးတန်ဖိုး (လိုသော) ၏ခွဲခြာ။ ventral pallidum အတွက်အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများ၏ဤပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆိုင်းပြသ ...
သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတတိယလိုင်းသည် dynamically က၎င်း၏လေ့လာသိရှိခန့်မှန်းအဆက်မပြတ်ကိုင်နေစဉ် CS ၏ '' လို '' စကြရအောင်ထံမှလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်းထန်သောငန်ခန့်မှန်းကြောင်း cue ပုံမှန်အားဖြင့် '' လိုခငျြမဟုတ် '' ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဇီဝကမ္မဆားအစာစားချင်စိတ်သွေးဆောင်သောအခါတစ်ဦး '' လိုခငျြ '' cue သို့ပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုသင်ယူမှုနှင့်သင်ယူဟောကိန်းများထဲမှာအရှင်မျှပြောင်းလဲမှု, ဖြစ်ပျက်ဤလှုံ့ဆျောမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဘို့ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သောအစာစားချင်စိတ်ပြည်နယ်မတိုင်မီကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘယ်တော့မှလိုကို၎င်း, CS အစဉ်အဆက်ရှေ့တော်၌ '' ကြိုက်တယ် '' အရသာနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျးပဲယခင်ကအနုတ်လက္ခဏာ CS ရုတ်တရက်သစ်ကိုပြည်နယ်အတွင်းရှိ '' လိုခငျြ 'နှင့်မက်လုံးပေး salience ၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများထုတ်ယူနိုင်ဖြစ်လာသည်။ ဆားအစာစားချင်စိတ်ပြည်နယ်အတွက်အလွန်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေတွင် CS ရုတ်တရက် [ဆား UCS အစဉ်အဆက် '' ကြိုက်တယ် '' အဖြစ်ကိုမြည်းစမ်းခဲ့သမီကပင် '' လို '' အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝှက်ကြောင်းအာရုံကြောပစ်ခတ်ရန်အချက်ပြမှုများ evokes67] ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခု cue ရဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးကိုအဆုံးစွန်တဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးပစ်မှတ်မှ '' လို '' မက်လုံးပေး salience နှင့် attribute ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အပိုဆောင်းအာရုံကြောစနစ်များကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်အဖြစ်, '' လို '' ထုတ်ယူနိုင်ရန်ယင်း၏စွမ်းရည်အနေဖြင့်ကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။
ပိုများသောသုတေသနသင်ယူမှုနှင့်ခန့်မှန်းနှိုင်းယှဉ် '' လို '' ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ဦးနှောက်အတွင်းသရုပျခှဲနေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုသက်သေအထောက်အထားယခုအချိန်အထိဤအစိတျအပိုငျးကွဲပြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုနှင့်သိသာစွာကွဲပြားအာရုံကြောအလွှာရှိသည်ဖော်ပြသည်။
အကျိုးသက်ရောက်စေ '' လို '' အကြိုက် '' ၏ neuroscience လေ့လာမှုများ, နှင့်ဆုလာဘ်များသင်ယူမှုအစိတ်အပိုင်းများသည်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသိသိသာသာဒီဂရီမှကွဲပြား neuroanatomical နှင့် neurochemical ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များပေါ်သို့ map ကြောင်းထင်ရှားပြီ။ ဒါဟာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကဦးနှောက်စနစ်များကိုပုံမှန်ဆုလာဘ် generate ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့ဥာဏ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ခံစားချက်၏လက်တွေ့အလုပ်မဖြစ်သို့ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သော applications များ mesolimbic စနစ်များာင်းအထူးသအကျိုးကိုအဘို့ '' လို '' ယိုယွင်းနေသဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆျောမှုမမှန်အတွက်ဆုလာဘ်၏ compulsive လိုက်စားထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်မည်သို့မည်ပုံပါဝင်သည်။
Hedonic အရသာဗီဒီယို 'ကြိုက်'
စာရေးသူအားဖြင့်သုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (ယူအက်စ်အေ) မှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်နှင့်ဆက်စပ်နောက်ဆက်တွဲဒေတာမှာအွန်လိုင်းဗားရှင်းအတွက်တွေ့နိုင်ပါသည် Doi: 10.1016 / j.coph ။ 2008.12.014.
၁။ Schooler JW၊ Mauss IB ။ ပျော်ရွှင်ရန်နှင့်၎င်းကိုသိရန် - အပျော်အပါး၏အတွေ့အကြုံနှင့် meta-အသိအမြင်။ ခုနှစ်တွင်: Kringelbach ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
2. Winkielman P, Berridge KC, Wilbarger JL ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာဖုံးများနှင့်ဒေါသထွက်နေသည့်မျက်နှာများကိုသတိမပြုမိသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကစားသုံးမှုအပြုအမူနှင့်တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလွှမ်းမိုးသည်။ Pers Soc Psychol Bull ။ 2005;31: 121-135 ။ [PubMed]
3. Fischman MW, Foltin RW ။ လူသားများအားဖြင့်ကိုကင်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး: ဓာတ်ခွဲခန်းရှုထောင့်။ ခုနှစ်တွင်: Bock GR, Whelan J, အယ်ဒီတာများ။ ကိုကင်း: သိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးရှုထောင့်များ။ CIBA ဖောင်ဒေးရှင်းမှစာတမ်းဖတ်ပွဲ; ဝိုင်လီ; 1992 စစ။ 165-180 ။
4. Kringelbach ML လူ့ orbitofrontal cortex: hedonic အတွေ့အကြုံဆုလာဘ်ချိတ်ဆက်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2005;6: 691-702 ။ [PubMed]ကှကျကှကျကှငျးကှငျးလိုရင်းတိုလူသားတွေအတွက်အပျော်အပါးအတွက် orbitofrontal cortex အခန်းကဏ္ဍ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ပြသည်။
5. Leknes S, Tracey I. နာကျင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘုံအာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9: 314-320 ။ [PubMed]
6. ဝီ RA, Carelli RM ။ အပျော်တမ်းအာရုံကြောသိပ္ပံ: ventral pallidum ပစ်ခတ်မှုအပေါ်အာရုံစိုက် hedonic ဆုလာဘ်: မကောင်းတဲ့အရသာကောင်းသောလှည့်သည့်အခါ။ J ကို Neurophysiol ။ 2006;96: 2175-2176 ။ [PubMed]
7. Tindell AJ, Smith က KS, Pecina S က, Berridge KC, Aldridge JW Ventral pallidum ပစ်ခတ်ရန် codes တွေကို hedonic ဆုလာဘ်: တစ်မကောင်းတဲ့အရသာကောင်းသောအလှည့်သည့်အခါ။ J ကို Neurophysiol ။ 2006;96: 2399-2409 ။ [PubMed]ဒီလေ့လာမှုက sucrose နဲ့ဆားအရသာမှ ventral pallidum အတွက်အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများမှတဆင့်ဆုလာဘ်အပျော်အပါးတစ်ဦးရည်မှန်းချက်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် '' အကြိုက် '' ၏အာရုံခံနိုင်တဲ့ coding အဘို့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
၈။ Knutson B, Wimmer GE, Kuhnen CM, Winkielman P. Nucleus သည် activation သည်ဘဏ္riskာရေးအရစွန့်စားရမှုအတွက်ဆုလာဘ်များအားအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Neuroreport ။ 2008;19: 509-513 ။ [PubMed]
9. Beaver အဘိဓါန် JD, လောရင့်အေဒီ, ဗန် Ditzhuijzen J ကို, Davis က MH, ဝုဒ်တစ်ဦးက, ဆုလာဘ် drive ကိုအတွက် Calder AJ တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအစားအစာ၏ပုံရိပ်များမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 5160-5166 ။ [PubMed]မက်လုံးပေးဆားကစ်အာရုံ-ရှာနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါတစ်ဦးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဉာဉျဆိုး (BAS) နှင့်ဆက်စပ်နည်းလမ်းလူသားတွေအတွက်အစားအစာဆုလာဘ်တွေကိုအားဖြင့် activated ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။
10 ။ subliminal လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခု neuroimaging လေ့လာမှု: ဦးနှောက်ကိုအင်အားသုံးသို့ပိုက်ဆံဘာသာကိုဘယ်လို Pessiglione M က, Schmidt က L ကို, Draganski B, Kalisch R ကို, Lau H ကို, Dolan R ကို, Frith ကို C ။ သိပ္ပံ။ 2007;316: 904-906 ။ [PubMed]ventral pallidum နှငျ့ပတျသကျသောဦးနှောက်ကိုမက်လုံးပေးဆားကစ်ပင်သတိအသိအမြင်ကိုအောက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိများနှင့်အကျိုးသည်လှုံ့ဆော်အရေးယူမှုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်းသွယ်ဝိုက်ဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ဖြစ်ကြောင်းလူသားတွေအတွက်ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
11. Childress AR, Ehrman RN, Wang Z, Li Y, Sciortino N, Hakun J, Jens W, Suh J, Listerud J, Marquez K, et al ။ စိတ်ထက်သန်မှု၏နိဂုံး - 'မမြင်ရသော' မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဖြင့် limbic activation ။ PLoS ONE ။ 2008;3: e1506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၂။ သေးငယ်သည့် DM၊ Veldhuizen MG၊ Felsted J, Mak YE, McGlone F. သီးခြားအလွှာများမှာကြိုတင်ခန့်မှန်း။ စားသုံးနိုင်သောအစားအစာဓာတုဗေဒပြောင်းလဲခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;57: 786-797 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13. Tobler P၊ O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz W. Reward သည်လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များတွင်စွန့်စားနိုင်သောသဘောထားနှင့်ဆက်စပ်သောမသေချာမရေရာနိုင်သည့်ကုဒ်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2007;97: 1621-1632 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Peciña S ကိုနျူကလိယအတွက် Berridge KC Hedonic ပူပွဲချင်းပြီး shell ကို accumbens: ဘယ်မှာ mu-opioids အကြောင်းမရှိချို၏ hedonic သက်ရောက်မှုတိုးလာသလဲ? J ကို neuroscience ။ 2005;25: 11777-11786 ။ [PubMed]ဘယ်မှာ mu opioid အချက်ပြမှုများကိုအကြောင်းမရှိနျူကလိယ၏ shell ကိုတစ်ဦးကုဗမီလီမီတာ '' hedonic ဟော့စပေါ့ 'ချိုမြိန်အရသာ၏အာရုံခံအပျော်အပါးအဘို့တိုးမြှင့်' 'like နှိပ်' 'သတ်မှတ်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းဟော့စပေါ့အပြင်ဘက်စင်ကြယ်သော '' လို 'နှင့် coldspot ဇုန်ထဲကနေ causation' 'like နှိပ်' 'opioid ၏ခန္ဓာဗေဒခွဲခြာများအတွက်ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
15 ။ Peciña S ကိုစမစ် KS, Berridge KC ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Hedonic ပူအစက်အပြောက်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2006;12: 500-511 ။ [PubMed]
16. Mahler SV, Smith က KS, Berridge KC ။ အာရုံခံပျော်မွေ့ခြင်းအတွက် Endocannabinoid hedonic hotspot - နျူကလိယမှ anandamide သည်ဥခွံ accumbens shell သည်ချိုသောအကျိုးကျေးဇူးကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 2267-2278 ။ [PubMed]
17 ။ Smith က KS, Berridge KC အဆိုပါ ventral pallidum နှင့် hedonic ဆုလာဘ်: sucrose "ကဲ့သို့" နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ neurochemical မြေပုံ။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 8637-8649 ။ [PubMed]ဤလေ့လာမှု ventral pallidum ယင်း၏ posterior ဇုန်အတွင်းဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောချိုမှ '' အကြိုက် '' တုံ့ပြန်မှု၏ opioid amplification များအတွက် ventral pallidum တစ်ကုဗမီလီမီတာ '' hedonic ဟော့စပေါ့ '' ပါဝင်သောသရုပ်ပြခဲ့သည်။
18. Berridge KC, Kringelbach ML ။ ထိရောက်သောစိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ - လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆု။ Psychopharmacology (Berl) 2008;199: 457-480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၉ ။ Pecina S. Opioid သည်နျူးကလီးယပ်စ်တွင် 'အကြိုက်' နှင့် 'လို' ခြင်းကိုဆုချသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008;94: 675-680 ။ [PubMed]
20. Kringelbach ML ။ အဆိုပါ hedonic ဦး နှောက်: လူ့အပျော်အပါးတစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy ။ ခုနှစ်တွင်: Kringelbach ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
21 ။ Smith က KS, Tindell AJ, Aldridge JW, Berridge KC ။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက် Ventral pallidum အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009;196: 155-167 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22. Ikemoto S. Dopamine ဆုိုင်ရာတိုက်နယ်: အ ventral midbrain မှနျူကလိယ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေးသောအထိ projection systems နှစ်ခု။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2007;56: 27-78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23. Steiner JE, Glaser: D, Hawilo ME, Berridge KC ။ hedonic သက်ရောက်မှု၏နှိုင်းယှဉ်စကားရပ်: လူ့မွေးကင်းစနှင့်အခြားမျောက်ဝံများအားဖြင့်အရသာမှအကျိုးသက်ရောက်သောတုံ့ပြန်မှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2001;25: 53-74 ။ [PubMed]
24. Grill HJ, Norgren R. အရသာဓာတ်ပြုခြင်းစစ်ဆေးမှု။ ၂ ။ နာတာရှည် thalamic နှင့်နာတာရှည်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါကြွက်များတွင် gustatory လှုံ့ဆော်မှုမှ Mimetic တုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1978;143: 281-297 ။ [PubMed]
25. Jarrett MM, Limebeer CL, က Parker LA က။ အရသာဓာတ်ပြုခြင်းစမ်းသပ်မှုဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း Delta9-tetrahydrocannabinol ၏ sucrose အာဟာရရရှိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005;86: 475-479 ။ [PubMed]
26. Zheng H ကို, Berthoud HR ။ အပျော်အပါးသို့မဟုတ်ကယ်လိုရီအဘို့အစား။ Curr Opin Pharmacol ။ 2007;7: 607-612 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27. Smith KS, Mahler SV, Pecina S, Berridge KC ။ Hedonic hotspots - ဦး နှောက်ကိုအာရုံခံနိုင်တဲ့ခံစားမှုကိုဖန်တီးပေးတယ်။ In: Kringelbach M၊ Berridge KC၊ အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
28. Smith က KS, Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် Opioid limbic circuit: နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral pallidum ၏ hedonic hotspots အကြားအပြန်အလှန်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 1594-1605 ။ [PubMed]
29. Solinas M, Goldberg SR, Piomelli The ဦး နှောက်ဆုချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် endocannabinoid စနစ်။ br J ကို Pharmacol ။ 2008;154: 369-383 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30. Kirkham တီ Endocannabinoids နှင့်စားကြူးခြင်း၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2008;20: 1099-1100 ။ [PubMed]
31. Shimura T, Imaoka H, ​​ventral pallidum တွင်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Yamamoto T. Neurochemical modulation ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2006;23: 1596-1604 ။ [PubMed]
32. Aldridge JW, Berridge KC ။ အပျော်အပါး၏အာရုံကြောဆိုင်ရာသင်္ကေတ: အ ventral pallidum ၏ "နှင်းဆီ - မျက်မှန်" ။ ခုနှစ်တွင်: Kringelbach ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
33. Richardson DK, Reynolds က SM, Cooper SJ, Berridge KC ။ benzodiazepine အာနိသင်တိုးမြှင့်မှုအတွက် endogenous opioids လိုအပ်သည်။ naltrexone ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် diazepam- သွေးဆောင် sucrose- 'ရိုက်' တိုး Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2005;81: 657-663 ။ [PubMed]
34. Dickinson A, Balleine B. Hedonics: သိမြင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာကြားခံ။ ခုနှစ်တွင်: Kringelbach ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
35. Berridge KC ။ သင်ယူခြင်းအကျိုးကျေးဇူး - အားဖြည့်ခြင်း၊ မက်လုံးများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ။ In: အယ်ဒီတာ Medin DL ။ သင်ယူပြီးတက်ကြွတဲ့၏စိတ်ပညာ။ vol ။ 40 ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2001 ။ စစ။ 223-278 ။
36. Daw ND, Niv Y, Dayan P. အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် prefrontal နှင့် dorsolateral striatal စနစ်များအကြားမသေချာမရေရာမှုအခြေပြုယှဉ်ပြိုင်မှု။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1704-1711 ။ [PubMed]
37. Dayan P, Balleine BW ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;36: 285-298 ။ [PubMed]
38 Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးမက်မက်မက်မောမှုအတွက်ကိစ္စ။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 391-431 ။ [PubMed]
39 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3137-3146 ။ [PubMed]စွဲလမ်း '' လို '' အဘို့အာရုံကြောအလွှာ၏မူးယစ်ဆေးာင်းနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်စေသောကြောင်းသီအိုရီနှင့် ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ် update ကို။
40 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC စွဲ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003;54: 25-53 ။ [PubMed]သင်ယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထအယူအဆနဲ့စွဲ၏ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ် hedonic ပြိုင်ဘက်ယူဆချက်ရန်, စွဲမက်လုံး-sensitive ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောစိတ်ကူးနှိုင်းယှဉ်။
41 Berridge KC, Aldridge JW ။ ဆုံးဖြတ်ချက်အသုံးဝင်မှု, ဦး နှောက်နှင့် hedonic ရည်မှန်းချက်များလိုက်စား။ Soc သိမှတ်ခံစားမှု။ 2008;26: 621-646 ။
42 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1993;18: 247-291 ။ [PubMed]
43 ။ Flagel SB, Akil H ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ တွေကို-related ဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: စွဲဘို့ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology ။ 2009;56: 139-148 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Uslaner JM, Acerbo MJ, ဂျုံးစ်လုပ် SA, ရော်ဘင်ဆင် TE ကင်း၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးညွှန်းတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှမက်လုံးပေး salience ၏ကိုတွက်ချက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006;169: 320-324 ။ [PubMed]အဆိုပါတွေကိုတစ်ခု autoshaping ပါရာဒိုင်းအတွက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးထုတ်ယူနိုင်အောင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တွေကို, 'စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက်' 'ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ယူထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသသည်။
45. Mahler S၊ Berridge K. Amygdala ယန္တရားသည်အဓိကကျသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ abstraction များအတွက် Society က။ 2007
46. ​​ရော်ဘင်ဆင် TE, Flagel SB ။ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏လေ့လာမှုမှတဆင့်ဆုလာဘ် -related တွေကို၏ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ Dissociating ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008 Doi: 10.1016 / j.biopsych.2008.09.006.
47. Wyvell CL, Berridge KC ။ တိုးမြှင့်ထားသော“ အကြိုက်” သို့မဟုတ်တုန့်ပြန်မှုအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲဆုချခြင်းအား“ လိုချင်ခြင်း” တိုးမြှင့်ခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 8122-8130 ။ [PubMed]
48. Holland PC ။ Pavlovian- ပရိယာယ်လွှဲပြောင်းနှင့်အားဖြည့်တန်ဖိုးအကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Exp Psychol-animated ပြုမူနေ Process ကို။ 2004;30: 104-117 ။ [PubMed]
49. Evans AH, Pavese N, Lawrence အေဒီ၊ Tai YF၊ Appel S၊ Doder M, Brooks DJ၊ Lees AJ, Piccini P. မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ventral striatal dopamine ဂီယာနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အမ်း Neurol ။ 2006;59: 852-858 ။ [PubMed]
ကုသမှု - ရှာဖွေသည့်ရောဂါဗေဒကစားသမားများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပုံစံများ။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 2003;25: 263-270 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အေးစက်အလင်းလှုံ့ဆော်မှု၏ 51 Schenk S က, Partridge ခသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2001;154: 390-396 ။ [PubMed]
နံပါတ်စဉ်အလိုက် 52 Aldridge JW, Berridge KC, Herman M, Zimmer L. Neuronal coding: အ neostriatum အတွက်ဖြီးလိမ်းပုံ၏ syntax ။ Psychol သိပ္ပံ။ 1993;4: 391-395 ။
dorsal striatum ရှိ Volkow ND၊ Wang GJ, Telang F, Fowler JS, Logan J, Childress AR, Jayne M, Ma Y, Wong C. ကိုကင်းနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲလမ်းနေသောတွန်းအား။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6583-6588 ။ [PubMed]
54 ။ Everitt BJ, ဘီးလင်း: D, Economidou: D, Pelloux Y ကို, Dalley JW, Robbins TW ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအလေ့အထများနှင့်စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့အားနည်းချက်အခြေခံယန္တရား။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3125-3135 ။ [PubMed]Cogently ပုံကြီးချဲ့ SR အလေ့အထကနေစွဲလမ်းရလဒ်များကိုဆုလာဘ်တွေရဲ့သင်ယူမှုအစိတ်အပိုင်း၏ပုံပျက်မှမရှိစေရန်သောစိတ်ကူး၏မျက်နှာသာအတွက်အမြင်တွေ့ရမယ်။
55. Haber SN, Fudge JL, McFarland NR မျောက်များရှိ Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းများသည်အခွံမှ dorsolateral striatum သို့တက်သောလိမ်ပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 2369-2382 ။ [PubMed]
56 Reynolds က SM, Berridge KC ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သည်နျူကလိယနျူကလီးယားတွင်ရှိသည့်ကြောက်ရွံ့သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစာစားချင်စိတ်၏တန်ဖိုးကိုပြန်လည်ညှိပေးသည်။ နတ် neuroscience ။ 2008;11: 423-425 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Faure တစ်ဦးက, Reynolds က SM, ရစ်ချတ် JM, အလိုဆန္ဒအတွက် Berridge KC Mesolimbic dopamine နဲ့ကြောက်: နျူကလိယ accumbens အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောအချိုမှုပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးခံရဖို့အားဖွင့်လှုံ့ဆျောမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 7184-7192 ။ [PubMed]ဒါဟာစမ်းသပ်မှု dopamine နျူကလိယ accumbens အတွင်းတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒတိကျတဲ့ဖက်ရှင်အတွက် corticolimbic အချိုမှုအချက်ပြမှုများနှင့်အတူအချင်းချင်းသရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာကိုကွောကျရှံ့လှုံ့ဆျောမှုနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပေးကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသသည်။
58. Levita L, Dalley JW, Robbins TW ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်တွေ့ရှိချက်အသစ်များသည်နျူကလိယသည် dopamine ကိုတိုးပွားစေသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002;137: 115-127 ။ [PubMed]
59. Kapur S. စိတ်ကြွဆေးများသည် 'စိတ်ပညာ' ကိုမည်သို့ဆန့်ကျင်လာသည် - dopamine မှ salience အထိစိတ်သို့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2004;25: 402-406 ။ [PubMed]
60. Aragona BJ, Carelli RM ။ dynamic neuroplasticity နှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏အလိုအလျောက်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006;13: 558-559 ။ [PubMed]
61 ။ Tindell AJ, Berridge KC, Zhang က J ကို, Peciña S က, Aldridge JW Ventral pallidal အာရုံခံကုဒ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: mesolimbic ထိခိုက်စေစိတ်ကြွဆေးများကချဲ့ထွင်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005;22: 2617-2634 ။ [PubMed]dopamine အရေးကြီးတဲ့လွတ်လပ်သော '' အကြိုက် 'သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏သင်ယူခြင်းအစိတ်အပိုင်းများအချက်ပြမှုများ,' လို '' များကိုချဲ့ထွင်ကြောင်းတစ်ဦးကပထမဦးဆုံးအာရုံကြောနိုင်တဲ့ coding သရုပ်ပြ။
62 Smith က KS, Berridge KC, Aldridge JW ။ Ventral pallidal neuron များသည်နျူကလိယ accumbens ရှိ opioids နှင့် dopamine ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမြင့်နှင့် 'လိုသော' မြင့်မှုကိုခွဲခြားသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ abstraction များအတွက် Society မှာ။ 2007
63. Abler B၊ Erk S၊ Walter H. လူ့ဆုလာဘ်စနစ်အားသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောနှစ်ဆမျက်စိကွယ်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာခင်းကျင်းသောထိန်းချုပ်ထားသော fMRI လေ့လာမှုတွင်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များရှိ olanzapine ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 823-833 ။ [PubMed]
64. Leyton M. အလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒ - dopamine နှင့်လူတို့၏စိတ်အခြေအနေနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ။ ခုနှစ်တွင်: Kringelbach ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အပျော်အပါး။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
65. Salamone JD, Correa M၊ Mingote SM, Weber SM ။ ဆုလာဘ်အယူအဆအပြင်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2005;5: 34-41 ။ [PubMed]
66. Peciña S, Cagniard B, Berridge KC, Aldridge JW, Zhuang X. Hyperdopaminergic Mutant ကြွက်များသည်ပိုမိုလိုချင်သော်လည်းချိုသာသောဆုများကိုမနှစ်သက်ပါ။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 9395-9402 ။ [PubMed]
67. Tindell AJ, Smith KS, Berridge KC, Aldridge JW ။ Ventral pallidal အာရုံခံများသည်လေ့လာမှုနှင့်ဇီဝကမ္မအချက်ပြမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အချက်များအားမက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ထူးခြားစွာပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အာရုံကြောသိပ္ပံညီလာခံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း; နိုဝင်ဘာ 12, 2005; ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ။ ၂၀၀၅